Ngokuzimisela ... Kungani Wena? | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 NgeSonto, Novemba 20, 2011 Douglas Karr
Sisebenza namakhasimende amaningi asezingeni eliphezulu ngakho-ke umsebenzi wethu omningi awunzima ... kumane nje kuzanywa ukugxila kumakhasimende ethu, ukubeka phambili umsebenzi wawo, nokwenza amasu athuthukisiwe.
Kungani ulahla enye imali emikhankasweni yesikhathi esifushane esikhundleni sokutshala imali kumasu wesikhathi eside?
Kungani ulindele ukuthengisa okuningi kanti awukakhuphuli ngokulingene utshalomali lwakho lokumaketha?
Kungani usagcina abasebenzi bezentengiso kubasebenzi uma bengavali imikhondo efanelekile?
Kungani wenza izixazululo zangaphakathi lapho ungaya kuzithenga kushibhile, ngokushesha nangcono?
Kungani uzama ukuthuthukisa ezinye izici lapho ulahlekelwa amaklayenti ngaphezu kwalezo ezingasebenzi?
Kungani uthenga okungabizi kakhulu, wazi ukuthi umkhiqizo wakho awubizi?
Kungani usakhokhela umuntu ozovuselela isiza sakho lapho amasistimu wokulawulwa kokuqukethwe engabizi?
Kungani usaqhubeka nokwenza ibhizinisi ne-ejensi efanayo engakwazi ukufakazela i-ROI yabo?
Kungani utshala imali emkhankasweni omusha kanti awuvumelanga owokugcina ukuthi uqede?
Kungani uvuza amaklayenti amasha hhayi lawo abenawe isikhathi eside?
Kungani ukhokhela inkokhelo ngokuchofoza ngakunye lapho ungahlungi amagama angukhiye angekho noma uvivinye izinhlobo ezihlukile zezikhangiso zakho noma amakhasi okufika?
Kungani uthenga iwebhusayithi entsha engafaki amasu eselula, okusesha nokuguqula?
Kungani ukhokha ukuze ukhangise isiza sakho uma singalungiselelwe ukuseshwa?
Kungani uthenga isiza esisha kanti awukaze usebenzise leli lokugcina?
Kungani ukhangisa kwamanye amasayithi uma ungenawo amavidiyo uwedwa?
Kungani uzama ukukala ngamagama asemqoka ongasoze walinganisa kuwo futhi uzibe lawo omsila omude ongawenza?
Kungani ukhetha amagama asemqoka aqhuba izinkulungwane zezivakashi kanti okudingayo kungabambalwa?
Kungani uzama ukulinganisa kuzwelonke lapho awuklelisi endaweni?
Kungani uzama ukukala kangcono kumagama angukhiye angeke aguqulwe abe ukuthengisa?
Kungani ubuyekeza analytics isonto ngalinye lapho ungasethanga imicimbi, izinhloso, ukulandela umkhondo kokuguqulwa, ukuhlanganiswa kwe-ecommerce noma imingcele yokuthengisa?
Kungani ufuna ukungena ezinkundleni zokuxhumana ube wazi ukuthi awukuthandi ukuba senhlalo?
Kungani umaketha ku-Twitter lapho isiza sakho singaguquleli izivakashi?
Kungani ufuna ababhalisile abasha kanti abaningi bazikhipha ohlwini lwe-imeyili yakho?
Kungani uthumela i-crappy yakho masonto onke email esikhundleni sokuthumela okungakholeki nyangazonke i-imeyili eqhuba imiphumela yangempela?
Kungani umaketha ku-Facebook kanti awunalo uhlelo lokukhulisa i-imeyili?
Kungani ubhuloga kusizinda okungeyona eyakho… wakha inani negunya lokuthile ongasoze wazuza kukho?
Kungani ubhuloga futhi ungakhuthazi okuqukethwe okuchithe isikhathi esiningi ubhala?
Kungani usebenza ku-resume? Imisebenzi emikhulu ayikaze ivele ngokuhambisa i-resume?
Kungani uzosebenza nsuku zonke ukwesaba okwenzayo esikhundleni sokuyeka nokwenza lokho okuthandayo?
Kungani ukuTwitter nakuFacebook ungabhulogi?
Kungani uqala uhlelo lwe-imeyili lapho isiza sakho singasebenzi?
Kungani ukhathazeke ngezinga lokushaya uma ungenalutho kusayithi lakho ukugcina abantu behlanganyela?
Kungani ubhala okuqukethwe okuningi kanti awunaso nesithombe sakho kusayithi lakho ukuze abantu bazi ukuthi ungubani?
Kungani ubhala okuqukethwe okuhle futhi ukwethule kusayithi olizondayo?
Kungani uchitha isikhathi ucabanga nge- into enkulu elandelayo esikhundleni sokukwazi kahle lokho osunayo?
Kungani uzama ukuzenzela ngokwakho ngokwakho esikhundleni sokuthola usizo?
Ngivame ukuhlekisa ngabantu ukuthi ngingumxhumanisi wezokuxhumana kepha angivamile ukuxhumana nabantu ngemithombo yezokuxhumana. Kuliqiniso impela, noma kunjalo. Namuhla elinye lamakhasimende ethu lisanda kuqala ikhasi le-Facebook lenkampani yabo… Izinyanga eziyi-6 ngemuva saqala ukusebenza nabo. Bekungaba ukungakhathali kimi ukuthi ngibachukuluze ngecebo lezokuxhumana ngoba bengakawutholi wonke umsebenzi abebewenza vele.
Wonke umuntu uhlale ecindezela abezentengiselwano ukuthi benze okuthile okusha, okuhlukile, okuthokozisayo, njll .. kepha ngaphandle kwesisekelo esihle okwakha kuso, konke lokho kungukuchitha isikhathi nemali. Yini osebenzela kuyo okungafanele ube yiyo?
Ukukhangiswa kokuqukethwe kwe-B2B: Umhlahlandlela weGrande ovela e-Eloqua
I-Oct 5, i-2011 ku-6: i-41 PM
UDoug, okuthunyelwe okuhle. Mane ufuna ukwazi ukuthi usebenzisa ini ukudala lokhu okufakiwe kusuka kukhophi nokunamathisela kuma-blog akho:
Ie Kopisha / unamathisele “Yini osebenzela kuyo okungafanele ube yikho?”
-> Funda kabanzi: https://martech.zone/marketing/seriously-why-are-you/#ixzz1ZwreWPmh ”
I-Oct 5, i-2011 ku-6: i-46 PM
Ngempela kulandelela ukuthi bangaki abantu abenza ikhophi futhi, uma basebenzisa isixhumanisi esinikeziwe, kukwazisa ukuthi babuyele kusayithi lakho ngombhalo okopishiwe! Izinto ezinhle!